Raysalwasaare Farmaajo oo Dalka Kenya u Dhoofey • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Raysalwasaare Farmaajo oo Dalka Kenya u Dhoofey
Raysalwasaare Farmaajo oo ka duulaya Garoonka Muqdisho Photo: Xafiiska RW
Raysalwasaaraha Dawladda kumeelgaarka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wefdi uu hoggaaminaayo ayaa maanta u duuley dalka Kenya.
War ka soo baxay xafiiska Raysalwasaaraha ayaa lagu sheegay in Mudane Farmaajo uu casumaad ka helay dhigiisan dalka Kenya Raila Odinga.
Raysalwasaare Farmaajo ayaa saxaafadda u sheegay waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan Raysalwasaaraha Kenya ka hor inta aanu ka duulin magaalada Muqidisho.
“Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in Ra’iisul Wasaaraha Dalka Kenya uu igu casuumo dalkiisa isla markaana aan yeelano kulan muhiim u ah labada dalba. Kenya waa dal aan wallaalo nahay, runtiina u istaagan sidii ay u caawini lahaayeen shacabka soomaaliyeed iyo sidii waddanka Soomaaliya uu u yeelan lahaa Dowlad soo celisa amniga iyo kala danbeynta. Arrimaha aan kala hadli doono ayaa waxaa ka mid ah xiriirka labada dal, arrimaha amniga, arrimaha qaxootiga soomaaliyeed ee ku sugan Dalka Kenya iyo arrimaha xilliga kala guurka ah iyo go’aamadii Dowladda FKMG ah ee la xiriira xilliga kala guurka ah iyo sidii xal loogu heli lahaa soo afjaridda dhibaatada dalka Soomaaliya.” ayuu yiri Farmaajo
Waxaa lagu wadaa in todobaadka danbe dalka Kenya uu ka furmo shir heer caalami ah oo ay soo qaban-qaabisey, Qaramada Midoobey kaas oo ah mid waatashi kuna saabsan sidii dhinacyada Soomaalidu ay u wada hadli lahaayeen meelna isula dhigi lahaayeen marka la gaaro bisha Agoosto ee uu dhamaado xiliga sharciga ah ee Dawladda kumeelgaarka ah.
Xukuumadda kumeelgaarka ah ayaa shirkaas qaadacdey, sidoo kale xubno ka tirsan baarlamaanka ayaa ku baaqey in aan shirkaas laga qayb gelin.
Ma cadda in Raysalwasaare Raila Odinga ku qancin doono Raysalwasaare Farmaajo in shirka Nairobi ka furmaaya 12 -13 April ay ka soo qaybgalaan iyo in kale, sidoo kale raysalwasaare Farmaajo ma sheegin in Beesha caalamka ee taageerta DFKG uu kula kulmi doono dalka Kenya mudada uu halkaas ku sugan yahay. Safarka Raysalwasaaraha ayaa ku soo beegmaya isaga oo laba maalmood ka hor ku dhawaaqey in Hay’adaha Qaramada Midoobey ee ku hawlan arrimaha Soomaaliya ay 90 maalmood gudahood ugu soo guuraan Muqdisho.
Hooska aklhri warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska Raysalwasaaraha: